Maamulka Kaalinka 5aad, Ayaa Gabalka Dhagaxbuur Qiimayn ku Samaynaya, Tolow Jwxo-shiil ma ku Jiraa! – Rasaasa News
Jun 30, 2009 Jwxo-shiil
Waxaa muddo 5 maalmood ahba la malmalayaa, dad laga soo ururiyey gabalka Dhagaxbuur, kolkaas ayaan isweydiiyey tolow Jwxo-shiil dadkaas ma ku jiraa. Mar dambe ayaana la ii sheegay in ay yihiin dad laga waayey keena Jwxo-shiil waad og tihiin guriga uu ku jiree, hadabka kolkii in badan la malmalay ayaa waxaa la sheegay in ay iyaga laftigoodu isku farfiiqeen.
Waxaanu aad uga walaacsanahay in uu Jwxo-shiil dad badan oo masaakiin ah uu galaafto, intii uu ka dhuumanayey N/hurayaalka Jabhada Wadniga Xoreynta Ogadeeniya [Jwxo],oo iyagu hadii ay arki lahaayeen Jwxo-shiil ay uga dhignaan lahayd in ay Ogadeeniya xorowday.
Waa dabeecad waligiiba lag yiqiinay in uusan ka fikirin dhibaatada dadweynaha balse uu ka fikiro uun naftiisa, Bal muxuu ka doonay guriga ay eedadii maqashu ugu xidhan tahay, muxuusan oromo iyo caro aan laga filaynin uusan u aadin.
Waxaanse aad ula yaabanahay, kuwan masuuliyiinta lagu sheegayo intii ay is lahaayeen waa oday wayn oo adeerkiin ah oo uu col dabada ka wadee qariya ayey guryahoodii iyo caruurtoodii dab galiyeen. Bal daya dhibaatada haysata dadka ma waxay ka difaaci karaan cadowga aan u naxaynin.
Dambiile cirkaa diiday oo dhulkaa diiday ruux alaale ruuxii u gar gaarana isna waa dambiile, dadeynaha Somalida Ogadeeniya looma qarinin lagana qarin maayo, waxaana loo sheegayaa gudo iyo dibadba meesha ay doonaan ha joogaane in ay soo sheegaan hadii ay meel ku og yihiin Jwxo-shiil.
Waxaana looga digayaa in ay guryahooda ay ku qariyaan, kuwa Jijiga lagu malmalayana waxaan u sheegi lahayn naftu mar umbay bixi laakiin in ayna cidna saarin dambi anyna galin wax kasta oo lagu sameeyo.
Waxaa la filayaa in is malmalidu ay soo gabogabowdo maalmahan soo socda, wixii ka soo kordhana waanu idinla socodsiin doonaa.